केकी र आर्जनको झिमिक्कै परेली
अहिले नेपाली अभिनेत्रीहरु फिल्म र म्युजिक भिडियोमा सराबरी छाउन थालेका छन् । यसमा प्रियंका कार्कीदेखि आँचल शर्मासम्म छन् । यही पंक्तिमा लामबद्ध भएकी छिन्, केकी अधिकारी पनि । केकी अभिनित म्युजिक भिडियो हालै सार्वजनिक भएको छ । गीतको बोल छ, झिमिक्क परेली । यो गीत आर्जन पान्डे र मेलिना राइले गाएका हुन् । रोमान्टिक शैलीको
अष्ट्रेलिया जान झुटो बिहे गर्नेको कथामा ‘कागजपत्र’
चलचित्र ‘कागजपत्र’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । आज काठमाण्डौमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा अपिल बिष्ट निर्देशित चलचित्रको ट्रेलर सार्वजनिक गरिएको हो । यो चलचित्रमा नाजिर हुसेन, शिल्पा मास्के, सरिता गिरी, भोलाराज सापकोटा लगायतका कलाकारको मुख्य भूमिका छ । चलचित्रमा खिलेन्द्र तिमिल्सिना, मुकेश रेग्मी र प्रजापति सिवाकोटीको लगानी छ भने यसका कार्यकारी निर्माता निरज सिंह बिष्ट
धर्मेन्द्र सेवनको ‘कता हिँडेकी’
गायक धर्मेन्द्र सेवनको स्वरमा नयाँ गीतको म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ । बिहिबार राजधानीमा एक कार्यक्रम गर्दै ‘कता हिँडेकी’ बोलको गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक उक्त गीतको शब्द तथा संगीत पनि धर्मेन्द्र कै रहेको छ । लामो समयदेखि संगीत क्षेत्रमा रहेर काम गरिरहेका धर्मेन्द्र यस गीतबाट निकै आशावादी छन् । उनी भन्छन्, ‘मैले अहिलेसम्म
दीपिकादेखि ज्याकलिनसम्म, कसरी बलिउड सेलिब्रेटी आकर्षक देखिन्छन् ?
बलिउड सेलिब्रेटीले कसरी आफुलाई फिट एन्ड फाइन राख्छन् ? उनीहरु कसरी आफ्नो शरीर सुडौल बनाउँछन् ? उनीहरुको खानपान, फिटनेस रुटिन कस्तो हुन्छ ? यावत् विषयमा जिज्ञासा हुन्छ नै । भनिन्छ, बलिउडका धेरै सेलिब्रेटी छन्, जो खानपान र फिटनेसमा अति सजग छन् । उनीहरु खानपानमा त यसै सर्तक हुने नै भयो । फिटनेसमा पनि लगाव राख्छन्
सुपारीको पात टपरी हुने, नहुने सालैको !
३ फागुन, काठमाडौं । दाङका स्वाभिमान आचार्य अनि विधान पोखरेल र मकवानपुरका कोविदसिंह बानियाँले ०६३ देखि ०६५ सम्म काठमाडौँको एक शैक्षिक संस्थामा सँगै प्लस टु पढे । त्यसपछि फरक–फरक कलेजमा फरक–फरक विषय पढ्न थाले पनि उनीहरू विभिन्न किसिमले सम्पर्कमै रहे । त्यसको करिब चार/पाँच वर्षपछि उनीहरूबीच आफूले प्लस टु पढेको कलेजका पूर्वविद्यार्थीको सङ्गठन बनाउनका लागि
तेलुगु टिभी नायिका नागा झाँसी (२१) ले फेब्रुअरी ५ मा आफ्नो घरको पङ्खामा झुण्डिएर आत्महत्या गरेकी थिइन् । उनी हैदराबादको श्रीनगर कोलोनीमा बस्थिन् । उनले प्रेममा धोका पाएका कारण यस्तो कदम उठाएको बताइन्छ । भारतीय मिडियामा प्रकाशित समाचारका अनुसार उनी सूर्या तेजा भन्ने व्यक्तिसँग सम्बन्धमा थिइन् तर उनले झाँसीसँग विवाह गर्न अस्विकार गरेका थिए ।
केदारनाथबाट बलिउड डेब्यू गर्ने नायिका सारा अली खान आफ्नी आमा अमृता सिंहसँग निकै नजिक छिन् । उनी आफ्नी आमासँगै बस्छिन् । अब नयाँ वर्षमा साराले नयाँ सुरुवात गरेकी छिन् । रिपोर्टका अनुसार उनले आफ्नी आमाको घर छोडेकी छिन् र आफ्नो अपार्टमेन्टमा बस्न थालेकी छिन् । साराले आफ्नो इन्स्टाग्राममा एउटा फोटो सेयर गरेकी छिन् । यो
बलिउडमा यस्ता थुप्रै स्टार्स छन् जो प्रेम सम्बन्धमा रहे र विवाह पूर्व एकअर्कालाई डेट पनि गरे । यद्यपी, यीमध्ये कतिको सम्बन्ध इन्गेजमेन्टसम्म पुग्यो तरपनि अन्तिम अवस्थामा विवाह टुट्यो । यसमा रबिना टन्डनदेखि सलमान खानसम्मको नाम समावेश छ । आज हामी तपाईंलाई यस्तै सेलिब्रिटीबारे जानकारी दिँदै छौं जसको विवाह अन्तिम अवस्थामा टुटेको थियो । रबिना टन्डन
बेहुला–बेहुली बन्दा यस्तो देखिए संजोग र बर्षा
नायक संजोग कोइराला र नायिका बर्षा राउत आज बैबाहिक जीवनमा बाधिएका छन् । संजोग र बर्षाले काठमाण्डौको एक पार्टी प्यालेसमा बिहे गरेका छन् । तर, उनीहरुको बिहेमा चलचित्रकर्मी र मिडियाकर्मीलाई भने निम्तो दिएको छैन । तस्बिर खिच्न जाने पत्रकारलाई पनि प्रवेश दिइएको छैन । संजोग र बर्षा विगत ७ बर्षदेखि प्रेम सम्बन्धमा थिए । प्रेम
‘मन्त्री अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न नसक्नु प्रम ओलीको ठूलो कमजोरी’
मानव अधिकार तथा शान्ति समाज संस्थापक सभापति कृष्ण पहाडीले जहाज खरिद प्रकरणमा पर्यटन मन्त्री रविन्द्र अधिकारीले राजीनामा गर्नु पर्ने माग दोहोरएका छन् । आज रिपोर्टस क्वल ५ नम्वर प्रदेश कार्यलय बुटवलले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पहाडीले यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन् । मन्त्री अधिकारीले संसदलाई ढाटेको भन्दै अधिकारी पदमा बस्नुको लागि उपयुक्त नहुने उनको भनाई